विकारहरु खाने | USAHello | USAHello
विकारहरु खाने समस्या खाने छन् तपाईं आफ्नो शरीर बारेमा खराब विचार छ किनभने. तपाईं चरम वजन परिवर्तनहरू मार्फत जाने सक्छ. तपाईं खान सक्छ पनि सानो वा धेरै. These disorders cause serious physical illness.
शारीरिक छवि मतलब तपाईं आफ्नो शरीर महसुस र तपाईं आफ्नो शरीर देखिन्छ विश्वास कसरी कसरी. एक खाने विकार संग, किनभने आफ्नो शरीर छविको आफ्नो खाने बानी ठूलो परिवर्तन. तपाईंले सधैं आफ्नो वजन नियन्त्रण गर्ने प्रयास. जस्तै, तपाईं छैनन् हुँदा पनि तपाईं बोसो छन् जस्तै तपाईं महसुस किनभने तपाईं हरेक दिन धेरै सानो खान सक्छ. कुनै पनि व्यक्ति खाने विकार हुन सक्छ. तर, थप महिला पुरुष भन्दा एक खाने विकार छ.
खाने विकार को लक्षण
तपाईं underweight छन् तर तपाईं अझै पनि वजन प्रयास गर्दा Anorexia nervosa छ. Underweight तपाईं आफ्नो उचाइ र उमेर लागि पर्याप्त वजन छैन मतलब. तपाईं anorexia nervosa छ भने:
तपाईं खाने रोक्न सक्छ.
तपाईं पनि धेरै खेती हुन सक्छ.
तपाईं बाथरूम धेरै जाने त तपाईं चिकित्सा लाग्न सक्छ.
के तपाईं किनभने तपाईं आफ्नो शरीर देखिन्छ लाग्छ कसरी राम्रो व्यक्ति हुन् लाग्छ सक्छ.
तपाईं वजन तपाईं underweight छन् तापनि बढाउनका डराएको हो.
तपाईं कहिलेकाहीं खाना धेरै खाने गर्दा Bulimia nervosa छ र तपाईं के खान नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो यो महसुस. तपाईं खाना धेरै खाने पछि, तपाईं खाना उन्मुक्ति पर्छ जस्तै तपाईं महसुस. तपाईं bulimia nervosa छ भने:
तपाईं आफ्नो शरीर आकार र वजन बारेमा धेरै विचार.
तपाईं आफैलाई उल्टी बनाउन सक्छ (बान्ता गर्नु) तपाईं खाना धेरै खाने पछि.
तपाईं खाना धेरै खाने पछि धेरै अभ्यास हुन सक्छ.
तपाईं पनि धेरै खाना खाने पछि एक लामो समय को लागि खाने रोक्न सक्छ.
तपाईं पनि धेरै खाना खान र तपाईं रोक्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईं महसुस हुँदा Binge खाने छ. तपाईं कम से कम पनि धेरै खाना खान2हरेक हप्ताको लागि पटक6महिना. तपाईं सामान्यतया दुःखी महसुस, लज्जित, र दोषी तपाईं खान पछि.
विकारहरु खाने कारणहरू
तपाईंले यी खाने विकार को एक हुन सक्छ धेरै कारण छन्. कारण छन्:
अन्य मानिसहरू पनि बोसो छन् भनेर बताउन वा तपाईं राम्रो हेर्न छैन.
तपाईं वजन अन्य मानिसहरूलाई दबाबको महसुस. जस्तै, तपाईं एक मोडेल वा नर्तक छन् भने, मानिसहरू बताउन सक्छ तपाईं वजन गर्न आवश्यक छ कि.
तपाईं कम आत्म-सम्मान छ. कम आत्म-सम्मान के तपाईं एक राम्रो व्यक्ति हुन् लाग्छ जब छैन वा तपाईंले केहि गर्न सक्षम छन् भन्ने विश्वास बेला.
तपाईं फिक्री छ. फिक्री परेशान गर्न कुनै कारण छ धेरै हुँदा पनि तपाईँलाई भयातुर महसुस हुँदा छ.
तपाईं एउटा खाने विकार वा अर्को मानसिक स्वास्थ्य चुनौती भएका परिवारका सदस्यहरूले छ.
खाने विकार गम्भीर छन्. तपाईं मदत पाउन भने, तपाईं नराम्ररी आफ्नो शरीर बिगार्न सक्छ. अधिकांश मानिसहरू दबाइ आवश्यक छैन तर केही मानिसहरू एक चिकित्सक वा धेरै वर्ष को लागि मनोवैज्ञानिक कुरा गर्न आवश्यक.